Otu m si akwado maka Penn State Home Football Games - GridiNew - comparatif-audio.net
Otu m si akwado maka Penn State Home Football Games – GridiNew
Football bụ n’ezie egwuregwu dabere na mmalite ọkwa. แทง มวย Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbanye ya ngwa ngwa, oge fọdụrụ na ọsọ gị na-etinye ego. Tụkwasa m obi. Mụ onwe m gabigara nke a na mbido aha m. Mgbe m doziri ya, egwuregwu m gbanwere 100%.
Dejupụta akwụkwọ ọ bụla n’ụlọ akwụkwọ ọ bụla. Ajuju ndi a otutu otutu di na webusaiti ulo akwukwo. Ọ bụrụ n ’ịhụghị ya ebe ahụ, kpọọ ngalaba na – ahụ maka bọọlụ ma jụọ maka otu ị si aga n’iru ijupụta otu ihe a ga – enweta.
Kyle Orton: 22/34 maka elekere 296 na 4 TD na 0 INT. Orton agbachila nkịtị n’ọnwa ọ bụla na-esochi mmalite dị egwu n’oge ọkọchị mana ọ batara n’ọhụụ nke kpakpando bọọlụ fantasy ozugbo. Orton kwesịrị ịnọgide na-amalite na ọgbakọ niile n’ihi nnukwu ntụkwasị obi gị na ịgafe na Denver.
Yabụ, iji nwee ike ịba ọsọ ọsọ maka bọọlụ, anyị bido iji were chọpụta ihe ike dị. Maazị 285lb’er kwesịrị ịpịa n’etiti 550 na 600 ka ọ bido ịmalite ịghọta ọsọ ya. Egwuregwu ịkụ nzọ ข่าว ฟุตบอล วัน นี้ Nke a bụ ihe mere m ji na-akpọ ụbọ akwara mgbe niile!
Echiche m bụ na izu ole na ole mbụ nke ọnwa iri na abụọ bụ anyị niile enwetaghị onwe gị foto a pụrụ ịdabere na ya na ụdị gafee ngalaba njikọ, ọ ga-ewe izu ole na ole ka ụkpụrụ ahụ pụta. Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-elele usoro dị ogologo oge ma na-atụ aro na ụfọdụ egwuregwu bụ ndị ọkachamara n’ulo mmeri, ụfọdụ nwere nnukwu ndekọ (ma ọ bụ ogbenye) pụọ. Kedu nke nwere ike ịba uru metụtara nyocha ikpeazụ, mana m na-akpata ihe ndị dị otú a mgbe m na-achọ bọl bọọlụ na egwuregwu net. Yabụ, kedu ka anyị kwesịrị ịhapụ ile anya? Adịghị abanye n’oge ikpeazụ – Arụ m ọrụ na-erughị ọkara ọnwa iri na abụọ egwuregwu akụkọ ihe mere eme (egwuregwu egwuregwu naanị).
Swings, n’ụzọ ziri ezi, rụzuru ihe ndị na-emechi ọsọ karịa mmega ahụ ọzọ karịa legups igbe. Nsogbu bụ na ọtụtụ ndị na-eme ha ọhụma. Mee ha na nwunye na-arụ ọrụ ịbelata ibu, na-eme ka ọ bụrụ usoro ọkara squat.
Colt McCoy: 18/31 maka elekere 205 na 1 TD na 0 INT. McCoy ga – enwe ihe IT ga – eme ka NFL merie na mbụ mana agbanyeghị na ọ nweghị azụmaahịa pere mpe ka ọ bụrụ ihe agha bọọlụ efu.
Akwụkwọ ndị ahụ na-ekpughe na Football bidoro na China ebe a na-egwu ya dị ka ịgba bọl akpụkpọ anụ dịka obere oghere n’ime akwa silk bụ nke na-egosipụta n’ụzọ doro anya na mkpanaka achara. Ka oge na-aga, egwuregwu a gbasara na akụkụ ndị ọzọ n’ụwa niile. Ọchịchọ maka egwuregwu bọọlụ zuru oke ruru elu ya na England. Emere ọtụtụ mbọ iji gbochie bọọlụ hụrụ ka ọ na-ewu ewu.